DAAWO:- Xildhibaan Daahir Jeesow “Xukuumada Khayre waanu Ridaynaa” | Wardoon
Home Somali News DAAWO:- Xildhibaan Daahir Jeesow “Xukuumada Khayre waanu Ridaynaa”
DAAWO:- Xildhibaan Daahir Jeesow “Xukuumada Khayre waanu Ridaynaa”
Xildhibaan Daahir Amiin jeesow waxa uu sheegay in wasiiradda Xukuumadda RW Xasan Cali kheyre ay dhibaato ku hayaan fadhiyadda Baarlamaanka Soomaaliya, islamarkaana maanta madaxooda loo baajiyay kulanka, madaama ay soo xaadiri waayeen, Wuxuuna Hawada u mariyey Fariin Hanjabaad u muuqatay.
Xildhibaan Jeesow ayaa wacad ku maray in Xukuumadda Kheyre ay meesha ka bixi doonto, oo Mooshin ka keeni doonaan haddii Xildhibaanada wasiiradda noqday ay soo xaadiri waayaan kulanka maanta baaqday midkiisa kale.
“Waxaan Ballan ku Qaadaynaa hadii Fadhiga ku xigan Fadhigaan, Golaha Wasiiradu ay imaan waayaan, Wallaahay aniga ayaa Horkacaya, Mooshin ayaanu ka Keenaynaa oo Dhammaantood waan Ridaynaa, Ha Ogaado Raysal wasaaraha” Ayuu yidhi Jeesow.
Waxaa maanta oo sabti ah baaqday kulankii koowaad kalfadhiga 5-aad ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, Iyadoona Guddoonka Golaha shacabka Baarlamaanku uu sheegay in uu baaqday Kulankii koowaad Kalfadhiga 5-aad ee Xildhibaanadda Baarlamaanka Soomaaliya.
Ajendaha kulanka maanta ayaa ahaa in warbixin laga dhageysto guddiga Dastuurka oo ka hadlaya halka ay mareyso dib u eegista Dastuurka dalka oo 10 cutub oo ka mida wax laga bedelay.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal ayaa sheegay in kulanka kooramka buuxsami waayey, 116 ayaa timid waxaa la rabay in ay yimaadaan 139-xildhibaan.
Previous articleMadaxwaynaha Somaliland oo xilkii ka qaaday wasiirkii Warfaafinta iyo Gaashaan dhiga
Next articleXildhibaano Buuq ka kiciyay xarunta Golaha Shacabka+SAWIRRO
Cabdikariin Guuleed oo utanaasulay Cabdiraxmaan Cabdishakuur
Wasiirro iyo Taliyeyaasha ciidamada DF oo looga yeeray Baarlamaanka Somalia